Iyo yakasanganiswa yeMacBook uye iPad ine kupeta skrini ye2026 | Nhau dze iPhone
Iyo yakasanganiswa yeMacBook uye iPad ine kupeta skrini ye2026
Folding skrini ine zvakawanda zvekushandisa kupfuura nharembozha, uye Apple inogona kunge ichitoshanda pane prototype ingave yakasanganiswa yeMacBook uye iPad ine kupeta skrini uye saizi yakazara ye20 ″.
Kutanga yaive muongorori, Ross Young, uye zvino ndiMark Gurman anoita seanosimbisa iyi nhau. Apple inogona kunge ichitoshanda pachigadzirwa chitsva chine kupeta skrini. Uye isu hatisi kutaura nezve iPhone, asi MacBook, kana kuti MacBook/iPad hybrid iyo kubhedhenurwa zvakazara kungaita 20 inches muhukuru, uye yaigona kushanda selaptop kana yapetwa, uye sehwendefa kana yakavhurika zvakazara, kana kunyangwe seyekunze yekutarisa.
Ne data diki diki, Antonio De Rosa akagadzira vhidhiyo iyi inoratidza kuti chigadzirwa chitsva ichi chingave chii kwaari, chaizotyoka nemitsara mitsvuku yakawanda yakanyorwa neApple: iPad/MacBook hybrid, kana Mac ine touch screen. Sezvinoonekwa muvhidhiyo, nepo hafu yechishandiso iri 995 skrini, imwe hafu ine 1/3 inogarwa ne trackpad, uye yasara 2/3 skrini. Aya 2/3 angave anobata kiibhodhi kuti akwanise kushandisa mudziyo seMacBook, ine dhizaini yakafanana neiyo yemamodheru azvino asi nemusiyano wekuti pachinzvimbo chemechani keyboard. Ini ndaizoshandisa on-screen keyboard, chimwe chinhu icho vazhinji vedu hatipedzi kugutsikana.
Remangwana remuchina uyu harisati ranyatsojeka. Ingave prototype ichiri mumatanho ekutanga ekukura kwayo isingamboone mwenje wezuva, kana kuita shanduko dzakakosha dzinoita kuti itaridzike kushoma sezvatinofungidzira izvozvi. Iko fungidziro yevanoongorora uye Gurman ndeyekuti, kana iwe ukaona ichi chishandiso munyika chaiyo, hazvingadaro kusvika 2026, pamwe ichiperekedza kuratidzwa kweiyo chaiyo Apple Magirazi uye Apple Car.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo yakasanganiswa yeMacBook uye iPad ine kupeta skrini ye2026
Tweetbot inovandudza zvese zviziviso zvayo mushanduro yayo itsva 7.1
Kutengeswa kwe iPhone muEurope kunokura uku Samsung ichidzikira muna 2021